Ahoana ny fomba fanaovana layout magazine | Creatives Online
Tokony ho 20 na 30 taona lasa izay, dia tsy raharahan’olona fotsiny ny fanaovana gazety. Nisy fahalalana sy fampiasam-bola lehibe nilaina mba hahombiazana. Na izany aza, amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny Internet, ny gazetiboky amin'ny Internet dia mihamitombo ary miara-miaina amin'ny gazety ara-batana. raha mba tianao manaova gazety na nasaina namolavola, mety efa nikaroka tao amin'ny harato ny fomba fanaovana layout magazine ianao. Hanome tanana anao ve izahay?
Manomboka amin'ny fototra isika fa ny gazety dia mety ho karazana sy karazana maro. Gazety lehibe, kely, roa volana, isam-bolana, isam-bolana, isan-kerinandro... Eto isika dia miresaka momba ny dingana tsy maintsy ataonao sy izay rehetra tokony hofehezinao alohan'ny hidirana amin'ity tetikasa ity.
1 Inona no tokony hodinihina alohan'ny handrafetana gazety
2 Mamorona gazety iray tsikelikely
2.1 Mampiasà programa fandrafetana gazety
2.2 Fonon'ny layout sy takelaka anatiny
2.3 Manonta sy mizara
3 Ahoana ny fandrafetana gazetiboky haingana sy mora
Inona no tokony hodinihina alohan'ny handrafetana gazety
Ny gazetiboky dia heverina ho fitaovam-pifandraisana. Mifantoka amin’ny lohahevitra iray manokana izy io; raha ny marina, dia tena mahalana ny mahita gazety ankapobe satria, raha izany, dia heverina ho toy ny gazety bebe kokoa.
Matetika, rehefa mandre ny teny hoe gazetiboky ianao, dia tonga ao an-tsainao ireo amidy any amin'ny magazay sy ny gazetiboky. Saingy miaraka amin'ny fanitarana ny Internet dia tsy maintsy atao ao an-tsaina ihany koa ny gazety virtoaly.
Rehefa manamboatra gazety, dia zava-dehibe ny mitadidy lafin-javatra sasany Na dia tsy mifandray amin'ny famolavolana aza izy ireo, dia misy fiantraikany amin'ny gazety. Ary inona ireo?
Ny mpanjifa kendrenao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, miresaka momba ny mpihaino kendrenao izahay. Ary nahoana izany no zava-dehibe? Eny, satria ny fonony, ny sary ary ny lahatsoratra dia tsy maintsy mahasarika ny sainao sy hahitanao azy mahaliana. Ohatra, alaivo sary an-tsaina hoe te hamorona gazetiboky ho an'ny ankizy ianao. Fa ianao mametraka ny fonony amin`ny lohateny mifantoka kokoa amin`ny ray aman-dreny noho ny ankizy, ary malemy, tsy misy dikany sary izay tsy miantso. Hividy izany aminao ve izy ireo? Ny tena azo atao dia hoe tsia.
Ny vanim-potoanan'ny gazetinao. Izany hoe, raha hamoaka azy isan-kerinandro, isam-bolana, isaky ny roa, telo, efatra... Mety hihevitra ianao fa tsy misy fiantraikany amin'ny famolavolana izany, fa ny marina dia satria tsy maintsy mampandre ianao. ao izany mba hahafantarany hoe rahoviana no hivoaka ny laharana manaraka raha tianao ny hamaky anao hatrany.
Momba ny inona ny gazetinao? Zava-dehibe ihany koa ny mpanjifa kendrenao ary koa ny lohahevitry ny gazetinao. Ny tiako holazaina dia inona no horesahinao? Misy gazety momba ny lohahevitra maro: sinema, kolontsaina, boky, fifosana... Noho izany dia mila mifantoka amin'ny zavatra fantatrao fa misy mpihaino ianao, fa manam-pahaizana ianao (na manana olona) ary tianao sy/ na mahazo vola.
Mamorona gazety iray tsikelikely
Tsy sarotra ny manamboatra gazety. Raha manana iray eo an-tananao ianao dia ho hitanao fa misy ampahany fototra roa. Amin'ny lafiny iray, ny fonony aloha sy aoriana izay natao amin'ny pejy iray ihany. Ny pejy voalohany amin'ny gazety dia mandeha any aoriana, matetika eo amin'ny toerana misy ny mpiara-miasa amin'ilay gazety (eo amin'ny fonony aloha) ary izay ho avy ao amin'ny gazety manaraka (eo amin'ny fonony aoriana).
Avy eo dia hisy ireo takelaka mandrafitra ilay gazety. Raha ara-batana indray, dia apetraka miaraka amin'ny farany ny voalohany ary ampifandraisina amin'ny fomba izay, rehefa vita pirinty, ary aforitra, dia marina sy araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra.
Raha virtoaly ny gazety, dia tsy izany no izy, ary atao amin'ny filaharany.
Inona avy ireo dingana tsy maintsy ataonao? Raha raisina fa manana ny fampahalalana rehetra ilaina amin'ny gazetinao ianao (sary, sary, dokam-barotra, lahatsoratra...) ny dingana tokony hataonao dia:
Mampiasà programa fandrafetana gazety
El Ny tena ampiasaina sy atolotra dia Indesign. Tsy programa maimaim-poana izy io, fa ny safidy hafa dia tsy mahatratra ny haavon'ity iray ity. Noho izany, raha tena te hanao gazety ianao, ary tsy mampiasa môdely hamoronana azy, dia tsy maintsy mampiasa vola amin'ny fividianana ilay programa ianao.
Tsy sarotra ny mampiasa azy, fa mila fotoana ianao hifanaraka amin'izany ary indrindra indrindra, hianarana azy io. Ny hafa amin'ity dia manana QuarkXpress, Illustrator, CorelDrwa, FreeHand...
Fonon'ny layout sy takelaka anatiny
Rehefa manana ny programa ianao dia ny dingana manaraka mamolavola ny fonony sy ny pejy anatiny. Ny ataon'ny maro dia ny manao azy mitokana, amin'ny fomba izay, rehefa omeny ny lalana, dia mitambatra ny antontan-taratasy rehetra mba hitondra azy ireo ho printy, na mba hahazoana dika mitovy amin'ny gazety amin'ny pdf (izay no izy. matetika atolotra virtoaly, ankoatra ny famakiana azy amin'ny Internet).
Amin'izao fotoana izao dia ilaina ny mandinika ny endrika gazety (raha ao amin'ny A4, B5, B6…) ary koa ny karazana taratasy izay hanaovana azy (Hisy fiantraikany amin'ny loko), ny famolavolana ny lahatsoratra sy ny sary tsirairay, sns.
Ity no ampahany manan-danja indrindra amin'ny gazetiboky satria tsy voatery hieritreritra fotsiny ny fomba fizarana sary sy lahatsoratra, dokam-barotra ary endrika ianao, fa tsy maintsy mieritreritra koa:
Ny typography magazine. Na ho an'ny lohateny sy dikanteny ary lahatsoratra.
loko solontena. Azonao sary an-tsaina ve ny gazetibokin'ny ankizy mampiasa mainty sy fotsy?
Ny layout. Izany hoe, ahoana no hamolavolanao ny pejy tsirairay. Ho toy izany koa ny sasany, fa raha apetrakao toy izao izy rehetra dia ho leo.
Mazava ho azy fa tsinontsinoavinay ny hoe manana kalitao ny sary hampiasainao ary manana fampahalalana marina sy mampahafantatra ny lahatsoratra, mifandray amin'ny besinimaro, mahasarika sy mahaliana (ary voasoratra tsara).
Manonta sy mizara
Rehefa vita ny gazetiboky dia tonga ny fotoana manapa-kevitra ny hanonta azy (ka tsy maintsy entinao any amin'ny mpanonta printy ary omeo azy ny antsipiriany teo aloha momba ny endrika, karazana taratasy ...); na mametraka azy misintona an-tserasera (na ampidiro amin'ny sehatra iray mba ho vakiana amin'ny Internet ilay gazety).
Izany rehetra izany dia ampahany amin'ny famolavolana ny gazetiboky.
Ahoana ny fandrafetana gazetiboky haingana sy mora
Tsy sarotra ireo teboka etsy ambony ireo. Saingy ny zava-misy dia rehefa manomboka mamolavola ny gazetiboky ianao, ary ny pejy tsirairay dia mety ho tofoka amin'izany ianao ary tsy hivoaka mihitsy. Noho izany antony izany, maro ireo mpikatroka no misafidy, alohan'ny hanaovanao ny endrikao manokana, amin'ny fampiasana môdely.
Ireo dia hita na karamaina na maimaim-poana. Aiza? Mamela lisitra ho anao izahay.
Amin'izao fotoana izao dia mila manohy izany ianao ary mandany fotoana kely amin'ny famolavolana gazetiboky. Ny voalohany dia mety ho ny ela indrindra, fa avy eo dia ho mora kokoa aminao ny zava-drehetra. Mazava ho azy fa aza very izany drafitra izany satria hanampy anao ho an'ny hafa izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Ahoana ny fomba hanaovana layout magazine